Admin – Page 3 – Radio
January 2, 2019	256	Like
January 2, 2019	223	Like
January 2, 2019	141	Like
DEGDEG: Nin Bajaajle ah oo Bartamaha Magaalada lagu Dilay
January 1, 2019	113	1
Wararka naga soo gaaraya degaanka Garasbaaley ayaa waxa ay sheegayaan in Askari ka tirsan Ciidanka dowladda Soomaaliya uu maanta degaankaasi ku dilay nin Mooto Bajaajle ah ka dib markii ay murmeen. Ninka dilka gaystay ayaa caan ka ah degaanka Tareedisho...
Toos u Daawo:- Hoolka Baarlamaanka iyo Dhaarinta Xildhibaanada+Tirada Xildhibaanada
January 1, 2019	161	Like
Garoowe (Codka Nabadda) Waxaa hada ka socota xarunta Baarlamaanka Puntland dhaarinta xildhibaanada cusub eeb Baarlamaanka Puntland oo maalintii shalay ahayd lagu dhawaaqay. HALKAAN HOOSE SI TOOS AH UGA DAAWO
January 1, 2019	323	Like
Nairobi (Codka Nabadda) Cadeymo badan oo Turkey uu ururiyay ayaa muujinaya in meydka wariye Jamaal Khaashuqji ee wali maqan uu ku dhex jiro ceelka beerta ku taala guriga Qunsulka Sacuudiga ee dalka Turkey. Kadib markii si taxadar leh halkaasi ay u...
January 1, 2019	259	1
Garoowe (Codka Nabadda ) Kadib markii habeenkii xalay ahayd ay ku dhawaaqeen gudida xalinta khilaafaadka Puntland liiska xildhibaanada cusub ee Baarlamaanka Puntland ayaa waxaa magaalada Garowe ka taagan xiisad culus oo ka dhalatay arintaasi, waxaana isimadda dhaqanka Puntland qaarkood ay ku...
December 31, 2018	267	Like
Garoowe (Codka Nabadda) Wararkii ugu dambeeyey ee magaalada Garoowe oo ah caasimadda dowladda Puntland ayaa sheegaya inuu mashquulkii ugu cuslaa saaka ilaa xalay ka socdey xarunta barlamaanka Puntland ee Garoowe. Gudiga xallinta khilaafaadka iyo ansixinta barlamaanka cusub ayaa ku mashquulsanaa...
XOG CUSUB:- Qabiilkee ayuu kasoo jeedo ruuxii isku Qarxiyay Tiyaatarka+Magaciisa….
December 31, 2018	88	Like
Muqdisho (Codka Nabadda) Al Shabaab ayaa muddo todobaad ah kadib shaaciyay magaca ruuxii isku qarxiyay afaafka hore ee tiyaatarka qaranka, halkaasi oo dad badan ay ku dhinteen. Al Shabaab ayaa sidoo kale baahiyay qabiilka uu kasoo jeedo ruuxii isku qarxiyay...
December 15, 2018	47	Like
Wararka aan ka heleyno Magaalada Baydhabo ee Xarunta Gobolka Baay ayaa waxa ay sheegayaan in halkaasi maalintii saddexaad ay ka socdaan Banaanbaxyo Rabshado wata. Dadka banaanbaxa dhigaya ayaa si weyn uga soo horjeeda Xarigii loo geystay Wadaadka Mukhtaar Rooboow Cali...